The Voice Of Somaliland: “Qadyadeena Somaliland ee gooni iskutaagu waa muqadas,ciddii wax kale sheegaysaa ee carqalad iyo tashwiish kula dhexjirtaana inaga” M. Rayaale.
“Qadyadeena Somaliland ee gooni iskutaagu waa muqadas,ciddii wax kale sheegaysaa ee carqalad iyo tashwiish kula dhexjirtaana inaga” M. Rayaale.
(Waridaad)-Madaxweynaha jamhuuriyada Somaliland Mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa markii u horreysey qiray in xukuumaddiisu ay ku guuldarraysatay fulinta ballanqaadyo hore uu dadka ugu sheegay. Waxana uu ku baaqay in aan wakhti dambe ku lumin khilaaf, wadajirna loo wada shaqeeyo.
Sida waxa uu Madaxweynuhu ku sheegay khudbad dheer oo uu maanta uga jeediyey fagaaraha beerta xoriyada 16 guurada ka soo wareegtay markii ay Somaliland xornimadii ka luntay dib ula soo noqotay.
Waxaanay u dhignayd iyada oo dhameystiran sidan:
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Saturday, May 19, 2007